दक्षिण कोरियामा अनलाईन मार्फत सपिङ्ग गर्नेको सङ्ख्या १६ प्रतिशतले वृद्दी! – Kantipur Press
दक्षिण कोरियामा अनलाईन मार्फत सपिङ्ग गर्नेको सङ्ख्या १६ प्रतिशतले वृद्दी!
दक्षिण कोरियामा अनलाइन मार्फत सामान किन्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार गत अगस्ट महिनामा दुई अङ्कले वृद्धि भएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण कतिपय प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू अझै पनि लागू भएकाले पनि अनलाइन किन्नेहरूको सङ्ख्या बढेको अनुमान गरिएको छ ।
अनलाइनबाट किन्नेहरूमध्ये खाना माग गर्नेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको र खाना विक्री गरेर मात्रै लाखौँ रूपैयाँको कारोबार भएको पाइएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार गत महिनामा १६‍‍‍‍.८ प्रतिशतले अनलाइनबाट किन्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । यो सङ्ख्या सन् २००१ देखिकै सबैभन्दा धेरै भएको बताइएको छ ।
दक्षिण कोरियामा अहिले पनि दैनिक १५ सयभन्दा बढी सङ्क्रमित थपिने गरेका छन् भने केही अहिले पनि सङ्क्रमित अवस्थामै रहेका छन्।
दक्षिण कोरियामा अपार्टमेन्टको बाहिरी सिसा पुस्ने क्रममा ४० मिटर माथीबाट खसेर एक श्रमिकको मृ’त्यु !
दक्षिण कोरियाको ईन्छन स्थित सोङ्दो मा अवस्थित एक अपार्टमेन्ट को बाहिरी भागमा रहेको सिसा पुछने क्रममा ४० मिटर माथीबाट खसेर २९ बर्षिय श्रमिकको घटनास्थलमै मृ’त्यु भएको छ।
२७ तारिख बिहान ईन्छनको यन्सु सोङ्दो विजनेस डिस्ट्रिक मा अवस्थित ४९ तल्ला अपार्टमेन्ट को १५ औँ तल्लाको बाहीरी सिसा पुछदै गर्दा एक्कासी खसेर घटनास्थलमा मृ’त्यु भएको ईन्छन प्रहरी कार्यालयलाई उदृध गर्दै कोरियाली सन्चार माध्यम सउल सिन्मुनले जनाएको छ।
मृ’त व्याक्तीलाई टाउको मा ठुलो चो’ट लागेको र घटनास्थलमा तुरुन्तै एम्बुलेन्स आएर नजिकको अस्पतालमा संस्थामा पुर्याउदा अस्पतालले मृ’त घोषणा गरेको जनाईएको छ।
४९ तल्ले अपार्टमेन्ट को सिसा पुछने काम सरसफाई कम्पनिले करिव १ महिना अगाडी देखी गरेको र घटना हुने दिन सरसफाई को अन्तिम दिन रहेको जानाकारीमा आएको छ।साथै उक्त सरसफाई ठेक्का लिने कम्पनी ले ६ जना पुछने कामदार लगाएकोमा मृ’तक पहिलो पटक घटना हुने दिन आराबाईट गर्न आएको बुझिएको छ।
ईन्छन प्रहरीका अनुसार अहिले प्रहरीले उक्त कम्पनीले सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरे नगरेको,सुरक्षा उपकरण प्रयोग गरे नगरेको बिषयमा गम्भिर अनुसन्धान थालेको बताएको छ।मृ’तकको नाम तथा देश समेत खुलाईएको छैन।
कोरियाले जे सिकायो…
अक्टोबर १४ तारिखदेखी दक्षिण कोरियामा नयाँ नियम लागु हुने !